Kipligat: “iigu dhaqsada saxiixa, rag baa isugayee”
Ilaah baa mahadleh nabadgelyo iyo naxariis ha ahaato Nabi Muxamed korkiisa.
Akhristayaal waxaa la sheegay in mar nin wadaad ah loogu yeeray inuu wacdiyo haweenay jirkeeda ka ganacsan jirtay. Sheekhii oo wacdigii wada ayey haweenaydii aragtay asxaabteedii oo soo socota markaasay sheekhii ku tiri sheekh ii dhaqso waa la isugayaaye. Ma fogayn markii Ururka Midowga Yurub ku lahaa Kipligat waxa dib-u-heshiisiinta loo samaynayo waa Soomaali ee waa inay heshiiyaan oo aan arrinta laga dhigin inaan doonayno inaan wax ku khasabno ama u yeerino. Soomaalidu waxay tiraahdaa geedkii orod lagu fuulo orod baa looga soo degaa. Ma dhabbaa isagoo diyaarad ku qoran in inta dastuurkii horkeeno Mbagathi uu yiraahdo ii saxiixa iyadoo aan loo dhamayn si uu Geneva iyo Newyork ugula kala shiro Midowga Yurub iyo Maraykan siday ukala-horeeyaan.
Maxaa loo lahaa wafti baa ka soo socda Somaliland? Haddii meeshii lagu kala-tegay maxay ka qaban?
Qab-qablayaashu dhagar bay wataan laakiin tan Ilaah baa soconaysa. Waddan dhani ka wayn wax lagu qaado boorsada Kipligat. Ergo Soomaali baa jirta ha iga harto. Mar hadday taasi xeradaasi ka dhacday waxay ila tahay in dhalinyaradu aysan dadkaas wax dambe ka filayn. Waqtigee la joogaa? Miyuusan Kipligat ogayn in Soomaalidu sheegan karto waxay tabanayso meel kasta oo la joogo?
Qab-qalayaashii Xamar ku shirayey in saas loo galo waa ku fiicnaayeen. C/Qaasim kalsoonidii baa ka tagtay. Soo irdi-ogaa? “Dheereeyaa maxaa siday”. Waxaad ka garanaysaa inuusanba ahayn waxay gaareen heshiis sida dhakhsaha ah ee ay Nairobi u yimaadeen. Marka haddii isagoo Nairobi jooga la iska saxiixday charter-kii waxaa la mariyey dowgooda waxaana la tusay inaysan waxba ahayn. Bal may joogaan gurigoodii? C/Qaasim wuxuu isku deyey inuu turubkiisa si fiican u ciyaaro laakiin dabo-ka-erigii waxaa ciyaaray afar qof oo kala ah TNG garabka Xasan Abshir & Deerow, G8 garabka Qanyare, SRRC iyo bulshada rayadka garabka SRRC. Marka C/Qaasim oon turubka ciyaarayn miyaa boolayn kara? Dabo-ka-eriga waxaa loo bixiyaa seddex seddex laakiin waxaa la arkayey in nin walba 36 xabbo hal mar la siiyey. Marka qaabkii aan naqaanay looma ciyaarin.
Reer Muqdishoow turubka la idin ka badiye iska baandheeya. Waakaas Maxamed Dheere oo leh waan dagalamayaa. Maxamed Qanyare oo leh shirka Muqdisho waxaa looga golleeyahay burburinta kan Mbagathi. Muuse iyo C/Qaasimna waa kaas. Haddaysan timihiinu isku dhan i xiirmin Soomaalida ha xiijinina. Xasuusta maqaalkaygii ahaa xirfadaha tartamayaasha waa tii aan soo iri Kipligat wuxuu rabaa inuu ariga raaciyo nin hal mar fariisin kara. Qolyihii Muqdisho waa fariisinwaayeen hal mar bal waxay ka dhigeen dhowr goosan oo midi is-hardinayo midi fariistay midna is orgaynaayo. Laakiin C/hi siduu maalintii oo dhan arigii u cayrinayey oo uu u diiday in neefi geed afka galiyo buu makhribkii keenay arigii oo tii ugu dambaysay ah. Arigii wuxuu hal mar fariistay xerada horteeda isagoon xittaa xeradii gelin. Marka C/hi dadkiisii edeb buu u soo yeelay marka idinku ari ma raaci kartaane howlihiina kale iska qabsada.
“Intaasi waxay ahayd sheekadii waxaa hadda noo bilaabanaya shilkihii”
Marka yaa qaadaya mas’uuliyadda wixii yimaada? Ma Kipligat mise qab-qablayaasha?
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 16, 2003